ShweMinThar: Xiaomi Mi 8 Lite Review: Beauty of Youth
Mi 8 Lite ဟာ 2018 အတွင်း Xiaomi ရဲ့ Design ပိုင်းချဉ်းကပ်မှုအပေါ် ဝေဖန်ချက်တွေကို Xiaomi ကနေတုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ အလှပဆုံးအဖြေတစ်ခု ဆိုရင်လည်း မှားလိမ့်မယ်မထင်။ သို့ပေမယ့် ရုပ်ဝတ္ထုတစ်ခုဟာ အဆင်းသက်သက်ပဲရှိပြီး (အရည်)အချင်းမပြည့်ဝရင် လူတွေက အဲဒီပစ္စည်းကို ရေရှည်သုံးဖို့ လက်တွန့်ကြမှာအသေချာပါပဲ။ ဒီတော့ အလှတရားတစ်ခုထက်ပိုတဲ့ ဘယ်လိုအရည်အသွေးတွေ Mi 8 Lite မှာ ပါရှိနေဦးမလဲ? Review နဲ့အတူ စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့။
Mobile Image မှာ ရရှိနိုင်မယ့် Mi 8 Lite ရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကတော့
-64/4 GB ကို ၂၉၉၀၀၀(၂သိန်း၉သောင်း၉ထောင်)
-128/6GB, Gray ကို ၃၄၇၀၀၀(၃သိန်း၎သောင်း၇ထောင်)
-128/6GB, Blue ကို ၃၅၃၀၀၀(၃သိန်း၅သောင်း၃ထောင်) ပါ။ ဝယ်ယူအားပေးသူတွေတွက် Temper Glass နဲ့ နားကြပ် လက်ဆောင်ရပါမယ်တဲ့ဗျား။
ဒါဟာ Mi 8 Lite အတွက် တခြား Xiaomi Mid-range ဖုန်း အတော်များများနဲ့မတူတဲ့ (Mi 8 SE နဲ့ Mi Note3က ချွင်းချက်) First Impression ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်ရခဲ့တဲ့ Twilight Color က အတော် "မှည့်"တယ် ဆိုရမယ်။ သူ့ရဲ့ကျောဘက် Glass Design က Mi 8 SE လို Flat ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုသွားပြီး မှန်ကြည့်လို့ရလောက်အောင် ကြည်တယ်။ Metal Frame ရဲ့ Color ကလည်း ကျောဘက်က Color နဲ့ ပနံသင့်တယ်။ Camera ဒေါင်လိုက်မကြိုက်သူတွေအတွက်လည်း ဒီဖုန်းလေးက အဆင်ပြေမှာပါ။ တစ်ခုတည်းသောမကြိုက်တဲ့အချက်က Mi8SE တုန်းကလိုပဲ Fingerprint ကို ငွေရောင်ကွပ်ထားတာကိုပါ။
နောက် Design တင်ပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ ရှေ့ဘက်မှာ Notch သေးတယ်၊ Chin က အပါးဆုံးမဟုတ်တောင် အတော်ပါးတယ်၊ ဘေးဘောင်တွေလည်း အသင့်အတင့်ပါးသွားတယ်။ ကြည့်ပျော်ရှုပျော်ရှိတယ်ပေါ့။
Build Quality အရပြောရရင် ကိုင်ရတာလက်ထဲ ခပ်နှစ်နှစ်လေးနေတယ်။ Size က အရမ်းမကြီးသလို အရမ်းလည်းမသေး။ ကျောဘက်နဲ့ဘောင်တွေကတော့ သေချာပေါက် Cover တပ်ကိုင်ရမှာပါ။ ဖုန်းရဲ့တည်ဆောက်ထားပုံက သပ်ရပ်ပြီး လူငယ်ဆန်တယ်။ အထူးသဖြင့် သူ့ရဲ့ Button တွေက တင်းတင်းရင်းရင်းရှိသလို Feedback ကလည်း Clicky ဖြစ်တယ်။ Xiaomi ရဲ့ ရိုးရာတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့ IR Blaster ကိုတော့ အပေါ်ဘက်မှာမတွေ့ရတော့ပေမယ့် SD Card Support အတွက်တော့ Hybrid Slot ပါလာတာတွေ့ရတယ်။
ဆိုတော့ကာ Design ပိုင်းကို ဦးစားပေးရွေးတတ်သူတွေအတွက် Mi 8 Lite က ခုံပေါ်တင်ထားရင်း တစိမ့်စိမ့်ထိုင်ကြည့်နေရင်တောင် စိတ်ကျေနပ်နေစေမယ့်ဖုန်းတစ်လုံးလို့ ယူဆမိတယ်။
Mi 8 Lite မှာသုံးထားတာကတော့ 6.26", 1080p+, LCD Display ပါ။ Color Accuracy ကောင်းတာကိုလိုလားတဲ့ ကိုယ်လိုလူအတွက်တော့ သူ့ရဲ့Display က သိပ်အားရစရာမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ Standard Mode မှာတောင် သူ့ Color တွေက Warm ဖြစ်တဲ့ဘက်သွားပြီး နဲနဲ Saturate ဖြစ်တယ်။ Black Level ကလည်း ပုံမှန်လောက်ပဲရှိတယ်။ နေရောင်အောက်မှာတော့ ကောင်းကောင်းမြင်နိုင်တယ်။ အထူးသဖြင့် AMOLED Display လို Color ခပ်စိုစို၊ ခပ်ရဲရဲကို ကြိုက်တတ်သူတွေ သဘောတွေ့လောက်မယ့် Display မျိုးပေါ့။
Fingerprint ရဲ့ Unlock Speed မြန်တာက Xiaomi ဖုန်းတွေရဲ့ထုံးစံဖြစ်နေပြီမို့ အထွေအထူးပြောစရာမလိုလောက်ဘူးထင်ရဲ့။ ထင်မထားမိတာက Face Unlock ရဲ့ Speed ပါ။ IR Face Face Unlock နီးပါးကို မြန်တယ်။ အလင်းရှိရင် Lock Screen မပေါ်ပဲတန်းပွင့်သလို အမှောင်မှာလဲ Speed နဲနဲနှေးသွားတာကလွဲရင် ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်။ သဘောအကျမိဆုံးက Camera နဲ့ 45° လောက် တစောင်းအနေအထားမှာတောင် Unlock ဖြစ်တာကိုပါ။ Mi 8 SE မှာတောင် မရခဲ့တဲ့ Experience မျိုးကို Mi 8 Lite မှာရနိုင်တာကိုတော့ အထင်ကြီးမိတယ်။
Mi 8 Lite ရဲ့ Single Speaker အပေါ် အစကသိပ်မမျှော်လင့်ခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့် Speaker ကနေ Bass သံကို စကြားချိန်မှာတော့ မှုန်ကုပ်ကုပ်နဲ့နားထောင်နေမိတဲ့ကိုယ့်မျက်နှာတောင် မျက်နှာပိုးမသပ်နိုင်အောင် ပြုံးစိစိဖြစ်သွားမိတဲ့အထိပဲ။ သူ့ရဲ့ Loudness ဟာ Mi 6X ကို မှီချင်မှ မှလိမ့်မယ်၊ သို့ပေမယ့် သူ့ရဲ့ Bass အသံက လက်ရှိစမ်းဖူးသမျှ Single Speaker တွေထဲမှာ သဘောအကျမိဆုံးပါပဲ။ သူ့ရဲ့ Mids တွေက Vocal နဲ့ Bass ရဲ့နောက်က Support သဘောမျိူးဖြစ်နေတာတစ်ချက်ကလွဲရင် Mi 8 Lite ရဲ့ Speaker က နားထောင်မိတဲ့သူကို စိတ်ကြည်နူးမှု အကောင်းဆုံးပေးနိုင်တယ်လို့ Personally ယူဆမိတယ်။
သူ့ရဲ့ဈေးတန်းဝန်းကျင်က တခြားဖုန်းတွေ နားကြပ်ပေါက်ကိုယ်စီ ပါနေချိန်မှာ သူ့ကျမှ Type C Adaptor သုံးနေရတာကတော့ Feel အောက်သလိုခံစားရတယ်။ Sound Quality အနေနဲ့ အားမရဆုံးကတော့ Volume ပါ။ ထုံးစံအတိုင်း 60-70% ဝန်းကျင်လောက်ထားမှ ကိုယ့်နားနဲ့အဆင်ပြေတယ်။ နောက်ပြီး သူ့ရဲ့ Bass သံက Volume ကြီးသလောက် သိပ်ပြီး Deep မဖြစ်ဘူးလို့ခံစားရတယ်။ ဒီနှစ်ချက်ကလွဲရင် Sound Quality ပိုင်းမှာ အပြစ်ပြောစရာမရှိ။ သီချင်းနားထောင်ဖို့ ဒီဖုန်းကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်း နောင်တရစရာမရှိဘူးလို့ ထင်မိတယ်။
Snapdragon 660 သုံးထားတဲ့ဖုန်းတွေ ခဏခဏမြင်ဖူးနေပြီဆိုတော့ Benchmark တွေ သပ်သပ်ထပ်စမ်းပြမနေတော့ဘူး။ စမ်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ CPU Throttling Test မှာလည်း သူ့ Performance က အတော်လေးငြိမ်တာတွေ့ခဲ့ရတယ်။ Real Life Usage မှာလည်း Daily Task တွေမှာ ချောချောမွေ့မွေ့အဆင်ပြေတဲ့အပြင် Gaming ပိုင်းမှာလည်း PUBG ကို HD, High Setting မှာ မထစ်မပြုဆော့နိုင်တယ်။ Temperature အနေနဲ့လည်း PUBG ဆော့ချိန်မှာတောင် အမြင့်ဆုံး 39°C လောက်ပဲရှိတယ်။ ဆိုတော့ကာ ဒီဈေးမှာ ဒီထက်မြင့်တဲ့ Performance ကိုလိုချင်ရင်တော့ Mi 8 SE ကိုရွေးခိုင်းဖို့ပဲ ရှိပါတော့တယ်။
Mi 8 Lite မှာ 3350 mAh Battery ပါတယ်ဆိုတော့ သူ့ Level တန်းမှာ ပေမှီဒေါက်မှီတယ်ဆိုရမှာပါ။ ဒီတော့ Battery Life ကရော? ထုံးစံအတိုင်း 50% Volume & Brightness မှာ
-1hr 720p Youtube (Wifi) ကို 12%
-1hr 720p Offline Video ကို 7%
-1hr PUBG, 70% Volume (Wifi) ကို 20% နဲ့
-8 to 9hr Stand-by (Single Sim) ကို 2% စသည်ဖြင့်ကုန်ပါတယ်။
အားရတာက သူ့မှာ USB Type C ကို Quick Charge 3.0 Support လုပ်တာပါ။ Charging Speed အနေနဲ့
-30min ကို 50% နဲ့
-10 to 100% ကို 1:20 hr ပဲ ကြာတယ်။ ဒီတော့ Daily Usage သမားတွေတွက်ကတော့ သာသာယာယာပါပဲ။
Hardware ပိုင်းကောင်းရက်နဲ့ Software Optimization ကြောင့်လို့ ဆိုရမလားပဲ။ Camera ပိုင်းဟာ Mi 8 Lite မှာ အားမရဆုံးအပိုင်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ သူ့ရဲ့ Back Camera က Mi 8 SE, Poco F1 တို့နဲ့အတူတူပါပဲ။ သို့ပေမယ့် Dynamic Range မှာ HDR ဖွင့်ရိုက်တာတောင် အားနည်းတာတွေ့ရတယ်။ Daylight မှာတော့ Software Support မဆိုးဘူးပြောရမယ်။ Camera ရိုက်ချိန်မှာတွေ့ရတဲ့ Noise တစ်ချို့ကို Background Processing နဲ့ရှင်းပေးတာ၊ Overexposed ဖြစ်ပြီထင်ရတာတွေကို ထိန်းပေးတာ စတာတွေကို သတိထားမိတယ်။ Day Time မှာတော့ Image Quality နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြဿ နာသိပ်မရှိ။
Impression ကျစေတာက သူ့ရဲ့ Low Light ပါ။ အလင်းရောင်ကောင်းနေသရွေ့အဆင်ပြေနေပေမယ့် အလင်းနဲသွားတာနဲ့ ဇာတိပြတော့တာပါပဲ။ ISO ကို စွတ်တင်တယ်၊ Noise ကလည်းထိန်းချင်တယ်။ အဲဒီမှာ ပုံထွက်တွေက Overexposed တွေဖြစ်၊ Detail တွေကျ၊ တစ်ချို့ Color တွေ Washed Out ဖြစ်တော့တာပါပဲ။ Noise ကတော့ တခြား Mi တွေထက် ပိုထိန်းနိုင်တယ်။ AI on မထားရင်တောင် Backgound Processing က သိသာတယ်။ Software Update တွေမှာ Fix လုပ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်မိတယ်။
Auto မှာ Overexposed ဖြစ်သလောက် Manual Mode မှာကျတော့လည်း Dynamic Range ကျနေပြန်ရော။ သူ့နောင်တော်တွေလိုပဲ Manual Control တော့အပြည့်ပေးထားတယ်။ ပုံထွက်က Auto ထက်သာပေမယ့် Overall Quality ကိုတော့ Mi 8 SE တုန်းကလောက် အားမရတာအမှန်။ AI Mode ကတော့ အတော်လေး Color Accurate ဖြစ်လာတယ်ဆိုရမယ်။ (Building တွေရိုက်တဲ့အခါ Saturation ဆောင့်တက်တာကလွဲရင်ပေါ့) Portrait Mode ကတော့ ရှုပ်ထွေးတဲ့ Scene တွေရယ်၊ အရမ်းမှောင်တဲ့အချိန်ရယ်ကလွဲရင် ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်။ ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကိုလည်း Background Blur Adjustment နဲ့ Light Trail, 3D Lighting Effect စတာတွေ ပြန်ထည့်လို့ရတယ်။
24MP Selfie Camera ကတော့ Xiaomi နဲ့ သိပ်အသားမကျသေးဘူးလို့ထင်မိတယ်။ အရင် 20MP တွေမှာထက် Overexposed ပိုဖြစ်တတ်သလိုပဲ။ သိပ်ပြီးကြီးမားတဲ့ကွာခြားမှုတော့ မတွေ့မိသေး။ Selfie Portrait လေးကတော့ Edge Detection မဆိုးဘူး။ Video ပိုင်းကတော့ Poco F1 တို့ Mi 8SE တို့တုန်းကလိုပါပဲ။
ဒီတော့ Camera ပိုင်းကို အဓိကထားရွေးချယ်တတ်သူတွေအတွက် Mi 8 Lite ကို သိပ်အားမပေးချင်။
လောလောဆယ်မှာတော့ Android 8.1 အခြေခံတဲ့ MIUI 9.6 Stable ထိပဲရဦးမှာပါ။ (Android Pie နဲ့ MIUI 10 Update မှာတော့ ပါလာဖို့ရှိလောက်တယ်) တခြား MIUI နဲ့သိပ်ပြီးထူးမခြားနားဆိုတော့ အထွေအထူးမပြောတော့ဘူး။ MIUI ကို မမုန်းရင် သုံးရသဘောကျမှာပါ။
ဒီတော့ Mi 8 Lite ကို ဘယ်လိုမြင်လဲ? လူငယ်ဆန်မှု၊ ပျိုမြစ်မှု အငွေ့အသက်တွေပါဝင်နေတဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးလို့မြင်ပါတယ်။ Color Accurate Display ကိုမှလိုချင်ရင်၊ SD 710 လို Performance မှ လိုချင်ရင်၊ Camera ပိုင်းအသားပေးချင်ရင်ရင်တော့ ဒီဖုန်းက သင့်အတွက်မဟုတ်တာ သေချာသလောက်ပါပဲ။ သို့ပေမယ့် ၃သိန်းခွဲဝန်းကျင်ဈေးမှာ 128/6GB RAM, SD 660, Great Sound Quality, Nice Battery စတဲ့ Feature တွေကို ဒီဖုန်းမှာရနိုင်မယ်။ ဆိုတော့ Design လှလှကြိုက်တတ်သူတွေအတွက် Fancy ဆန်တဲ့ ဒီဇိုင်းကာလာနဲ့အတူ ငယ်ရွယ်ခြင်းရဲ့အရသာကို Mi 8 Lite နဲ့အတူ ခံစားကြည့်ဖို့ အကြံပြုပါရစေ။
Htet Oo Naing (Xyon) PLANETX
#Xiaomi #Mi8Lite #Review